Announcement – Page2– Yangon Heritage Trust
The historic and reputable Basic Education High School (6) Botahtaung received Yangon Heritage Trust’s 17th commemorative Blue Plaque on March 2, 2017. Formerly known as St. Paul’s High School, it is one of the oldest schools in Yangon and located […]
ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (YHT)၏ ၁၆ ခုမြောက် ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင်ကမ္ဗည်းပြားကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း (ယခင် ကော်မရှင်နာလမ်း)ပေါ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးကြီးတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇တွင် တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၁၉၂၆ ခုနှစ်မှစ၍ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကြီးသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် အရေးပါသည့် နေရာဖြစ်လာကာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရန်ကုန်မြို့နေ လူတန်းစားအသီးသီးအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်အဝတ်အထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ နေ့စဉ်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရာနှင့် အားလပ်ချိန် လည်ပတ်ရာ အဓိက နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ယင်းဈေးကြီးသည် မြို့နေများအတွက်သာမက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား အနုပညာပစ္စည်းများ၊ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများဖြင့် […]
Yangon Heritage Trust’s 16th commemorative Blue Plaque was unveiled on January 20, 2017 at Bogyoke Aung San Market which is located on Bogyoke Aung San Street (formerly Commissioner Road). Since its opening in 1926, Bogyoke Market has beenaplace […]
ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်း (ယခင် ဘရွတ်ကင်းလမ်း) ရှိ ဂုဏ်သရေရှိ သမိုင်းဝင် ယုဝတီ ခရစ်ယာန်အသင်း (YWCA) အဆောက်အအုံတွင် YHT ၏ ၁၅ ခုမြောက် ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင်ကမ္ဗည်းပြားကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်က တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ YWCA အသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အသင်းကြီး ဖြစ်သည်။ အလွှာပေါင်းစုံအတွက် ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပရိုဂျက်များ၊ အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် အမျိုးသမီးများ၏ အရည်အချင်းနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောင်းလဲနိုင်သူများဖြစ်လာစေရန် ပျိုးထောင်ပေး […]